Ny ROI tsara ao amin'ny mailaka Newsletters
Vao haingana aho no nandefa ny lisitra fizahana marketing amin'ny Internet ary iray amin'ireo paikady manana laharam-pahamehana ny marketing amin'ny mailaka. Ny marketing amin'ny mailaka dia mbola manana tambiny avo lenta amin'ny fampiasam-bola, ambany ny vidin'ny fidirana, ary iray amin'ireo vitsy teknolojia fanosehana avela ho an'ny mpivarotra hanatona ireo mpanjifa ankehitriny.
Miasa ny marketing amin'ny mailaka - fantatsika rehetra izany fa ohatrinona ny lanjan'ny mailaka mailakao amin'ny fikambanana misy anao? Azonao ve ny mandeha sy ny tsy mandeha amin'ny marketing amin'ny mailaka? Azonao atao ve ny manisa ny tena Return on Investment (ROI) avy amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka na ny sandan'ny mpanjifa mailaka? Moa ve ny fampiasam-bola amin'ny paikady stratejika kokoa amin'ny marketing amin'ny mailaka handrisika ny firotsahana bebe kokoa sy ny fidiram-bola avo kokoa? Manaraka infographic avy amin'ny iContact mampiseho ny fomba tena ahatakarana ny lanjan'ireo lisitry ny varotra mailakao ary amin'ny alàlan'ny fanarahana ny fomba tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny mailaka, azonao atao ny mampitombo ny sandan'ny fampielezana mailaka amin'ny mailakao.
Tags: mailaka Marketingmailaka miverina amin'ny famatsiam-bolamailaka marketing roisanda marketing amin'ny mailakamailaka mailakaNewsletter
Dec 9, 2012 amin'ny 1: 58 AM
Moa ve ny mpampiasa Internet 93% tena aleony mailaka manokana avy amin'ny marika rehetra fa tsy fifandraisana iraisana amin'ny tambajotra sosialy? Moa ve tsy hiankina amin'ny hoe 'akaiky' izany fifamatorana izany.